Eshibhile ngokwezifiso insimbi engagqwali kokuzihlanganisa izingxenye mechanical izingxenye imboni kanye nabaphakeli I-Ouzhan
UKWAKHA izingxenye insimbi engagqwali
Izingxenye eziyinhloko zensimbi engagqwali yi-carbon, i-chromium, i-nickel, nezinye izinto ze-alloy ezifana ne-molybdenum, ithusi ne-nitrogen. Inqubo ebomvu yokubhoboza ubuchwepheshe obuthuthukisiwe bokucubungula ingcindezi obuthuthukisiwe obenziwe ngesisekelo sokunemba kokukhipha nokushisa okushisayo. Izici zomshini zezingxenye zithuthukiswa ngokushintsha indlela yokucubungula. Inqubo ebomvu yokubhoboza ishisa konke okungenalutho kwensimbi njengenqubo yokwenza kahle. Ukwakha isikhunta, ngaphandle kwezingxenye ezinkulu ezibomvu eziboshwe, kuvame ukwakhiwa ngasikhathi sinye, kanti ukwenziwa ngokunemba ngokuvamile kwenziwa izingcindezi eziningana.
Inqubo yokubhoboza ebomvu inokubaluleka okubanzi nokufinyelela kude ekusebenzeni kwemishini, imikhiqizo yensimbi yansuku zonke, ezokuvikela, izingxenye ze-aerospace nezinye izinhlelo zokusebenza. Isibonelo, izingxenye eziningi zemishini ezinjengenjini kadizili, ogandaganda, izimoto, imicibisholo, njll. Zilungele kakhulu ukukhiqizwa kwenqubo ebomvu yokushaya. Njengamanje, inqubo yokubhoboza ebomvu isetshenziswe kabanzi ekukhiqizeni imboni yehadiwe yansuku zonke, njengama-valve ahlukahlukene, amalunga wepayipi, amantongomane, njll ku-hardware yepayipi eyenziwe nge-punching red red. Ngezinzuzo zekhwalithi ezingenakulinganiswa, bekuye kwafaka esikhundleni semikhiqizo ebikhiqizwa ngokufa noma ukusakaza esikhathini esedlule. I-Ouzhan ihlinzeka ngezinsizakalo ezenziwe ngezifiso zensimbi engenasici enezingxenye ezibomvu eziboshwe ngamakhasimende anenani.
Izinzuzo Shanghai Ouzhan insimbi engagqwali izingxenye kokuzihlanganisa
- Sebenzisa imishini ejwayelekile yokukhiqiza, okulula ukuyifaka ekukhiqizeni, efanelekayo amabhizinisi amancane naphakathi
- Ukukhiqiza okuphezulu, okufanele ukukhiqizwa ngobuningi
- High bafake ukumelana
- Superior anti-corrosion performance futhi
- Izakhiwo zemishini yezingxenye ezibomvu zezitampu zilungile
- Thuthukisa ukuminyana kwensimbi futhi uthuthukise ukumelana nokugqwala kwezingxenye
- Ifanele zonke izinhlobo zokulungiswa kwensimbi enemibala noma emnyama
Insimbi engagqwali yomshini wokukhanda izingxenye zokucubungula izingxenye
Izinto Insimbi ye-Martensitic, i-ferritic steel, i-austenitic steel, i-austenitic-ferritic (duplex) insimbi engagqwali nemvula eyenza insimbi engagqwali, njll., SUS201, SUS304, SUS303, SUS420, SUS430
Ukwelashwa komhlaba Ukwelashwa komhlaba ngensimbi engagqwali kungenziwa ngezifiso ngokuya ngezidingo zakho, ukudweba ngocingo, ukupholisha, ukwenziwa kwangaphandle, ukukhethwa, ukuhlanzwa kwe-ejenti nokunciphisa,
Inqubo eyinhloko Pre-treatment → passivation (ngokuya ngemithetho yenqubo) → ukuqhuma (amanzi abandayo noma amanzi ashisayo) → neutralization → ukwelashwa kokoma
Ukusetshenziswa Amaphayiphu ahlukahlukene, amalunga wepayipi, amantongomane, njll.Ihadiwe lepayipi leTonghonghong selithathe indawo yemikhiqizo ekhiqizwe ngokufa noma ngokukhishwa ngezinzuzo zekhwalithi ezingalingani.
Langaphambilini Izingxenye Foring insimbi engagqwali
Olandelayo: Izingxenye ze-OEM zensimbi ezingenasici izingxenye zomshini